Facials Professional: izinhlobo, izinkomba kanye impendulo mayelana nomphumela
buso ukugcoba ubuso nomzimba abe ezihlukahlukene kakhulu ezingenzeka ezibhekwa izicelo. Zisetshenziswa ukuze ahlanze isikhumba, amandla alo amafutha, edonsa, ahlelembe imibimbi, nokunye. D. mask ukusetshenziswa ekhaya Kulula ukusebenzisa. Phela, nabo basuke edayiswa izikhwama. Kufanele kuphela buhlanjululwe ngamanzi afudumele - futhi ukulungele. Kodwa umphumela izimonyo enjalo kungaba banemizwa engqubuzanayo. Phela, wonke umuntu siqu izici ngamunye wabo, kukhona amacala ukwenqaba izithako ezithile imaskhi. Ngo ubuhle salon beautician professional kungaba kahle ukubala Ukwakheka kusho ukuthi wakukhipha lapho sibona umphumela omuhle kakhulu. Ngemva imaski enjalo ukungena izingqimba ezijulile kwesikhumba futhi kungabangela ushintsho emihle futhi ikhumbuleka isikhathi eside. Kodwa akubona bonke abantu abanomqondo isikhathi nemali kuvakasha nokucwala. Ngakho-ke, abanye nezinkampani ezinedumela elihle yezimonyo ukukhiqiza facials okhokhelwayo. Zisetshenziswa salon, kodwa lutho kuvimbela ukuba sizisebenzise ekhaya. Kodwa kudingeka wazi ukuthi izinhlobo kanye buso ubufakazi. Lo magazini uzobe anikezelwe athikili yethu.
Ukwahlukanisa professional face buso
Lezi izimonyo abe eziyinkimbinkimbi amakhemikhali ukwakheka. Kodwa ngokuvamile kungcono ezisebenzayo (ezibangela nomphumela ofiselekayo) futhi isisekelo (kusiza agents engena ijule isikhumba). facials Professional, kanye imikhiqizo ukusetshenziswa ekhaya, zihlukaniswe ngabobunjwa yabo: izimpushana, ayinhlama, okhilimu, si, i-collagen amashidi, plasticizers, ifilimu. Faka kusigaba la mathuluzi ubuhle futhi izinhlobo zesikhumba. Noma izinkinga ukuthi ukuxazulula. Ngakho, kukhona imaski ngoba ezomile, oily, kuhlanganiswe, allergenic, inkinga juvenile nokuwohloka kwesikhumba, isikhumba esikhunjeni, kanye Rosacea futhi Rosacea. Kukhona ngezigaba sokuqanjwa main. Lokhu buso ubumba, ulwelwe, isitshalo noma isilwane (i-collagen, umzanyana) umsuka. Kodwa ethandwa kakhulu (futhi kuyaqondakala umsebenzisi) Ukwahlukaniswa isenzo noma umphumela oyifunayo.
Usizo lwabenza imisenenzi Nobuhle inikeza kushintshana ukusetshenziswa kwemikhiqizo embalwa yezimonyo. Cabangela lezi zinyathelo. Ukufaka izithako ezisebenzayo zibe izingqimba ezijulile esikhumbeni, eklanyelwe bushelelezi imibimbi, yenza ukusebenza izinsimbi, moisturize futhi uqinisa izingqimba isikhumba, udinga kuqala ukuhlanza ezimbotsheni. Futhi ukwenza lokhu sidinga ukwandisa kubo. Usizo lwabenza imisenenzi Cosmetology isungule imali eningi esikhundleni uhambo kuya okugeza noma sime phezu epanini amanzi abilayo ithawula phezu kwekhanda lakhe. Ukuzuza depairing, imiphumela ukufudumala uvumele buso. Isibonelo "Apricot" kusukela inkampani "SkinLayt". Iqukethe izithako yemifino zemvelo kuphela, futhi substrate yakha umthelela ukufudumala. Kusukela nezindlala yakhe sebaceous evulekile, futhi isikhumba esehlanjululwe kusuka ngaphakathi. Esinye isibonelo - "Bioks Olufile" kusukela Israeli "Prime" umkhiqizi. imaski Amabili esiteji. izindlela Okokuqala isicelo kusukela namaminerali Olufile ukuthi steamed isikhumba. Okuhle-kungase kutholakale "isikhumba Hlanza" kusukela "Garnier" - steamed isifonyo epulakini ngaphambi. Cosmetology Professional itfutfukise si naso ngokuphumelelayo asuswe ikhule ezimbotsheni udaka Imigudu - "U-Anna: ngoLothani", isibonelo.
isikhumba ebusweni, ngoba embozwe izingubo, ngaphezu kwanoma yimuphi omunye ingxenye yomzimba uhlushwa ithonya elibi imvelo. Futhi omunye isici okufana ukushonelwa umswakama. Ngaphandle kwamanzi anele iba isikhumba flabby, esingaphili overdried, okuholela ukuvela imibimbi futhi isimo esicasulayo. Ukuze kulesetayelekile ibhalansi kwamanzi, sebenzisa buso hyaluronic ebusweni. cosmetologists Professional bayakwazisa acid ngenxa isisindo sayo esincane yamangqamuzana ezinto eziphilayo. It lingena shí epidermis abahudulele kuze kube amanzi amaningi ngokuphindwe kasithupha kunalokho ukala uqobo. Asidi i-hyaluronic kuyinto zokwenziwa impahla. Uveza umzimba wethu, ebusheni bakhe. Ngemuva kweminyaka engamashumi amabili nanhlanu kwesabelo yayo okwehlisa, kungani, futhi izinguquko ezihlobene nokukhula zenzeka. hydration Deep kuhlangene nezinye izinqubo yezimonyo. Cream imaskhi amino acid kanye asidi i-hyaluronic kusukela inkampani waseRussia "sera Umugqa Omusha Profeshional 'futhi sithuthukisa isenzo izidakamizwa, isetshenziswa kuwo.
Alginate - indlela jikelele Cosmetology
Le into akhishwa ulwelwe ensundu. Alginates ngenhlanhla lisetshenzisiwe nangokuqondene imithi - njengendlela amakhambi amanxeba kanye yokugcoba for ukusha. A professional Cosmetology alginate imaski ebusweni advantageously eyenziwe ngesimo izimpushana. Ngaphambi isicelo ke buhlanjululwe ngamanzi cool abilisiwe noma olunye uketshezi. Isenzo alginantnyh buso kabanzi. Extract ulwelwe brown ebusweni Uqinisa, ukwakha inhlobo Gutta-percha buso. It kwandisa kwegazi kanye lymph amanzi izimbangela. Ngaphansi buso enjalo kuyadingeka ukuze imizuzu amabili isiguli, ukugwema umsebenzi ebusweni hhayi ukukhuluma. Ngo Cosmetology jikelele ithuluzi professional inika umphumela ekuvuseleleni. Ngenxa imiphumela amagciwane imaskhi esetshenziselwa isikhumba oily, anti-induna. It moisturizes, smoothes imibimbi emihle, kuqinisa wabuka ebusweni futhi kuqabula umbala waso.
Ngemva kweminyaka engu-amathathu, umzimba iyeke ukhiqiza ukudla okwanele into edingekayo ukuze dermis ukuphila ngokugcwele. Ngakho-ke kubalulekile ukuba nikeza kwamandla kuso kusukela ngaphandle. Ukuze wenze lokhu, futhi ukukhonza facials professional efanele. Kodwa ekukhetheni kusho ezidingekayo uthintane beautician. Kuyokusiza ukucacisa ukuthi uhlobo olunjani isikhumba isiguli nokuthi uluhlobo luni amandla kuyadingeka. Isakhiwo buso enjalo zihlukile izidakamizwa esebenzayo. Lokhu kuyi-collagen (isilwane noma nemifino), futhi akhiphe placenta, kodwa lutho ukuphuma asidi i-hyaluronic efanayo. Athwala okunomsoco imaski kanye fat-encibilikayo amavithamini. Ukwakheka yezimonyo ihlanganisa izindlela kanye nokusetshenziswa-babashayeli. Zinikeza ukulethwa ukudla ezingqimbeni ezijulile epidermis. Njengoba izibonelo plasticizing imaski kusukela "Umugqa Omusha Profeshional" noma "Laktolan" kusukela umakhi Israeli "iZwe Elingcwele."
kufanele kuseshini amandla futhi asenze Kukangaki isikhumba ebusweni
Le nqubo, owesifazane kufanele wadalula, kakade sawela embundwini amabili nanhlanu. Uma une - uhlobo isikhumba evamile, amandla esiqhutshwa kabili ngonyaka. Fall ukulungiselela dermis emimoyeni ebandayo nesithwathwa, futhi entwasahlobo kuya lapho iba buthakathaka futhi udinga amavithamini. Usizo lwabenza imisenenzi amafutha buso ebusweni kumele usetshenziswe kabili ngesonto izinyanga ezimbili noma ezintathu. Cosmetologists axwayisa ukusetshenziswa amakhambi abantu "amandla" kwesikhumba. Ukusetshenziswa imayonnaise noma ukhilimu omuncu ngoba ubuso kuyinto theory kakhulu. Phela, ubisi fat neqanda amaprotheni makhulu kakhulu isisindo zofuzo ukuze engena ijule epidermis. Isikhumba buso esinje sibonakala Velvety. Kodwa lena - nje ukusebenza okwesikhashana, ungachazwa ifilimu okunamafutha ebusweni.
Abanikazi isikhumba oily sibhekene nezinkinga okubangelwa ukungasebenzi nezindlala sebaceous. Lokhu kubonakala namabala amnyama ebusweni, ikhule ezimbotsheni osuke usuvulekile. sheen okunamathelayo ihlobise intombazane. Futhi induna - nakakhulu. Ukuze ngobumnene sula isikhumba, asuse ipulaki kusukela odakeni bese usebenzisa facials elihlanza. izimonyo Professional ukwenza kube ezingeni eliphezulu kakhulu, hhayi nje kuphela ngezinto insipho amagciwane noma khuhla. Njengengxenye yalezi buso ngokuvamile iqukethe ubumba noma ephulukisa odakeni. Kodwa lezi zimali professional yokuhlanza sife kanye amavithamini, kanye kuqinisa pores kaolin. Njengoba isibonelo buso ezinjalo kungabangela umkhiqizo "Curtin" brand-Dutch ngamafutha tea tree. Lokhu kuwukhulula ukuvuvukala, disinfects, ahlanze. The Mask has a umphumela ohlala njalo ngoba ulawula uketshezi we nezindlala sebaceous futhi kunciphisa ikhule ezimbotsheni.
Maye, ukuguga - inqubo ngenakugwemeka. Kodwa professional anti-ukuguga buso ebusweni can kancane zakhe ezinde. Inqubo yokuguga sivezwe hhayi kuphela ukulahlekelwa isikhumba umswakama, kodwa ukukhiqizwa enganele collagen. Kule nentaba ebusweni bungacaci, uqala "ehle". Ukuze lesi sivivinyo Estheticians ephakamisa - facelift non-kuhlinzwa. Uselele (kodwa isikhathi esifushane, ithatha ukuwasha) futhi kancane. Usizo lwabenza imisenenzi Cosmetology amadili nge kule ndlela yesibili ukubuyisela isikhumba abasha. Veza imaskhi leso oqeda ubuso pose phezu ifilimu esobala - uhlobo Uhlaka olusekela circuit. Kodwa lena - nje ukusebenza ezibukwayo.
Uma ungafuni ukuba basuse ubuhle kanye nentsha, kanye insipho, ufuna ukusebenzisa professional yezimonyo buso ebusweni. Abanaso ukudala ezibukwayo umphumela nentaba okunembile kwezindikimba kwesilevu nezihlathi. Kodwa benza umzimba ukuba ukhiqize i-collagen ayo njengoba kwakunjalo ngesikhathi esemusha. Isibonelo salokhu elinguzifozonke, ungaletha imikhiqizo kule nkampani Italian "Kleraderm". The Mask singasetshenziswa futhi ekhaya - ulungele igcwele e cleaner izikhwama. The main izidakamizwa evuna collagen zasolwandle kanye retinol. Ukuhambisana uwoyela ukwatapheya Jojoba kula ulwelwe futhi akhiphe ginkgo biloba ukuthuthukisa umphumela rejuvenation yemisipha eqinisa isikhumba.
Uma une uhlobo isikhumba evamile, uku lucky, futhi izimali ukuze inakekelwe ngumuntu awudingi. Nokho, abesifazane abaningi beba ngokweqile kukhanye okunamafutha, flaking ezomile noma ukuluma kwesikhumba. ukuqubuka Youth kanye induna imbangela izakhiwo amantombazane amaningi. Futhi zisiza sokuphulukiswa facials. izimonyo Professional isungule indlela ephumelelayo kakhulu ukuba sinqobe izinkinga. Utamatisi imaski kusukela inkampani "Amamephu" ngobumnene bome isikhumba oily. It lingena singene izingqimba kwangempela dermis selumunca sebum, normalizes umsebenzi nezindlala sebaceous. utamatisi juice possesses umsebenzi elwa namagciwane. Ngaphezu kwalokho, kuyinto - i antioxidant omuhle. Ithuluzi esiza ukuba sibhekane ngokuphumelelayo induna kanye bushelelezi ngempumuzo ebusweni. Isivuvu-khuhla Hyseac kusukela "Uriazh" usizo amantombazane nge isikhumba esomile ngokweqile. It ngobumnene exfoliates izinhlayiya isikhumba esifile moisturizes dermis ezingeni ejulile.
Kuhle facials professional njalo aqukethe eyodwa noma zombili lezi zingxenye. I-collagen akhishwa ngesikhumba sesilwane, inhlanzi, namaprotheni kakolweni. Nobuhle Professional ukhathazekile, hhayi kuphela ukuze banikeze le-ukuguga anti isithako ekujuleni isikhumba. It ufuna ukuphoqelela umzimba ukuba ukhiqize i-collagen lalo. Ngakho, dermis luphakanyiswa turgor, bushelelezi out imibimbi futhi emphethweni, kuba wabuka ebusweni sobala. Ngaphezu kwalokho, i-collagen imaski amafutha, Lentulo, sithuthukisa synthesis fibroblasts. Hhayi-placenta kancane kunomphumela ekuvuseleleni. Kuyinto ecebile izinto esibalulekile emzimbeni kuphela odabuka yemvelo. umphumela ekuvuseleleni futhi okuzivuselela ka buso esinomhlapho baziswa abesifazane abaningi. Bayisibonelo okunye evumelekile ukuba suspenders kuhlinzwa.
Yini enye imaskhi lochwepheshe
Nobuhle salon sibhekane ngokuphumelelayo cishe zonke izinkinga kanye zamehlo zesikhumba. Ngaphezu kwalezi buso, kukhona amathuluzi ukususa freckles kanye nobudala izindawo (kuhlanganise senile), amakhorali, abami umbala, kuqinisa ikhule ezimbotsheni, aqabule futhi amathoni. Usizo lwabenza imisenenzi Nobuhle kunzima hhayi kuphela nge induna, kodwa futhi nge ngemiphumela lesi simanga, bakubheka ngempumuzo ebusweni. Kukhona imaski elakhelwe Rosacea abasengozini zesikhumba. Kunalabo ukuthi ususe umswakama okweqile, kunciphisa ukuvuvukala.
facials Professional: Izibuyekezo
Umehluko phakathi izindlela gumbi kanye nemikhiqizo mass-market cwe. I buso ezazisetshenziswa ogogo bethu, ngokugcizelela kakhulu kwi-strawberry umuntu ingcindezi, mhlawumbe, ukuletha siletha imiphumela efiselekayo, kodwa yaba ngeyesikhashana. Labo izikhwama zidayiswa ezitolo yezimonyo, ukuncelisa noma moisturize kuphela izingqimba engenhla isikhumba. Futhi ngenxa yokuthi ukusebenza kwabo futhi alithembekile. Ingqikithi ubuhle professional itholakala lokuthi ukuthi ngaphandle nommese ukuze ukungena ekujuleni dermis. Kodwa lokhu izingxenye imaski kufanele ibe ongaphakeme isisindo yamangqamuzana kanye nokusungulwa ukuba Micron elinemifanekiso. Izibuyekezo zithi professional face buso kungenzeka ukusebenzisa ekhaya. umphumela wabo lubonakale emva inqubo yokuqala. Kodwa ngaphambi kokufaka isicelo kubalulekile ukuba uthintane wesikhumba.
Ion Isixwa Revoskin nobuso Izibuyekezo nokusebenzisa Imiphumela
Peels Chemical ekhaya - esheshayo isikhumba rejuvenation.
Kuyini Mezoroller? Izibuyekezo
Namafutha elula kumaka Weleda: Ukwakheka, izakhiwo kanye nokubuyekeza
Kungani amajazi ekati akhiwa? Ungabasusa kanjani?
Coolants uhlelo bafudumale. Emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni Ukushisa: Intengo
Iyini intaba yeVenus?
Kanjani bezmotylnye JIG ngezandla zabo. Bezmotylnye JIG ku roach
IPhone 5 ngeke uphelelwa ngokushesha: imbangela kanye ikhambi lenkinga
Uhlu amafilimu "Disney" studio-okwakwenza inkampani edumile emhlabeni
Indlala iVolga esifundeni 1921-1922, e 1932-1933: izizathu. amaqiniso angokomlando